Kala duwanaanshaha cimilada ee udhaxeeya Sydney iyo Mareykanka | Saadaasha Shabakadda
Cimilada meeraha ayaa isbedeleysa waxayna ku sameyneysaa qaab waali ah. Toddobaadkii la soo dhaafay waxaan la kulanay mowjado qabow oo leh heerkul hoose, baraf daadad iyo roob culus. Mareykanka wuxuu ku qasbanaaday inuu ku dhawaaqo xaalad deg deg ah baraf aad u daran oo wata dabeylo xoogan iyo heer kul aad u hooseeya awgood. Si kastaba ha noqotee, Sydney (Australia) waxay gaadhay heer kulkii ugu kululaa 79-kii sano ee la soo dhaafay.
Maxaa ku dhacaya isbedeladan daran ee heer kulka?
1 Heerkulka sare iyo hooseeya
2 Diiwaanno cusub ayaa la qabtay
3 Dhinaca kale ee adduunka
Heerkulka sare iyo hooseeya
Waxa ugu horreeya ee la caddeeyo (kuwa shakiga ka qaba ama aan weli garanayn) Koonfurta Hemisphere hadda waa xagaaga. U janjeedha falaadhaha Qorraxda ayaa u dhaca si ka hooseeya woqooyiga Hemisphere, marka Qorraxdu way sii kululaataa. In kasta oo xaqiiqda ah in Dhulku uga dhow yahay Qorraxda xagaaga, waxa run ahaantii muhiim ah oo ah qodob go'aaminaya heer kulka ayaa ah u janjeedha falaadhaha Dunida. Haddii falaadhaha qorraxdu ku soo dhacaan si toos ah dhinaca dhulka way ka sii kululaan doontaa marka loo eego haddii ay si ula kac ah u garaacaan.
Hadda xilliga qaboobaha, falaaraha qorraxda waxay ka sii qumman yihiin cirifka koonfureed waxayna ku yaalliin cirifka woqooyi. Hase yeeshe iyadoo ay taasi jirto, xilliga xagaaga ee Koonfurta Hemisphere waxaa ka jira heerkul aan caadi ahayn oo sarreeya iyo dab-damis ba'an.
Magaalada Sydney ayay ahayd diiwaan heerkulka 47,3 digrii, kii ugu sarreeyay muddo 79 sano ah. Intaa waxaa sii dheer, xaaladaha degdegga ah ee dabka waxaa laga soo saaray aagga magaalooyinka waaweyn ee magaalada. Axadii ina dhaaftay, gubida bannaanka waa laga mamnuucay magaalada oo dhan si looga hortago fiditaanka dabka.
Hadafka ciidamada amniga ee Sydney, sida oo kale sanad walba Australia, waa in la yareeyo halista dabka kaymaha, maaddaama waddanku la il daran yahay cawaaqib xumo ka dhalanaysa carrada bacrinta ah sababo la xiriira nabaad-guurka joogtada ah ee carrada ay keento xaalufin.
Isla Axaddaas heer kulku wuxuu ku dhowaa inuu dhaafo kii waddanku ku dhacay sanadkii 1939 markay gaadhay 47,8 digrii. Heerkulka Penrith, oo ah galbeedka magaalada Sydney, waxaa xaqiijiyay xafiiska saadaasha hawada.
Dabka awgood, dhowr hanti oo ku yaallay gobollada Victoria iyo South Australia ayaa burburay.
Diiwaanno cusub ayaa la qabtay
Horaantii Sebtembar 2017, Australiyaanka waxaa looga digay inay u diyaar garoobaan xilli dabeed halis ah oo sabab u ah mid ka mid ah jiilaalkii ugu xumaa taariikhda Australia iyo heerkulka sare ee la filayo.
Intii udhaxaysay Diseembar 2016 iyo Febraayo 2017, in kabadan 200 diiwaanka cimilada ayaa laga jabiyay Australia oo dhan, taasoo keentay hirarka kuleylka, dabka kaymaha iyo daadadka xagaaga oo dhan.
Saynisyahannadu waxay sheegeen in heer kulka noocan oo kale ah oo ay ku jiraan kuwa badda ay sababeen isbeddelka cimilada. Isbedelka cimiladu wuxuu ku qaadaa xaaladaha cimilada caadiga ah xagjirnimada wuxuuna kordhiyaa inta jeer ee dhacdooyinka sida hirarka qabow, hirarka kuleylka, abaaraha iyo daadadka
Xitaa ciyaaryahanka tennis-ka Faransiiska ee ciyaarayay tartan tartan waa inuu ka noqdaa kuleylka daran. Waa markii ugu horreysay xirfaddiisa oo dhan inuu ka fariisto ciyaar.
Dhinaca kale ee adduunka
Dhamaadka kale ee adduunku wuxuu soo maray dhibaato uun. Iyadoo Australia ay tahay mid aad u kulul oo ay jiraan dabka kaynta, Maraykanka gudihiisa waxaa ka dhacay mowjado aad u qabow oo sababay duufaan daran isla markaana ku dhawaaqay xaalad deg deg ah.
Qeybo ka mid ah Mareykanka ayaa leh gaadho heerkulka illaa -37 darajo Celsius.
Markii ugu horreysay muddo 28 sano ah, gobolka Florida, oo ka mid ah kuwa ugu kulul Xeebta Bariga, wuxuu arkay baraf ka da’aya caasimadda gobolka, Tallahassee. Duufaantan ayaa saynisyahano ugu yeeraan bam saadaasha hawada.
Sida aad aragto, adduunku wuxuu u qaybsan yahay laba weji iyo cimilada sidoo kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Kala duwanaanshaha cimilada ba'an ee u dhexeeya Sydney iyo Mareykanka
Wax walba oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato volcanoes